China Kung Pao Chicken ụlọ ọrụ na-emepụta | Huikang
Kung Pao Ọkụkọ
Kung Pao Chicken bụ efere ọdịnala ama ama ama ama ama n'ụlọ na mba ofesi. A gụnyere ya na nri Shandong, nri Sichuan, na nri Guizhou, yana ngwa ya na ụzọ ya dị iche iche. Isi mmalite nri a nwere na ọkụkọ juru efere na nri Shandong, yana ọkụkọ na-ekpo ọkụ na nri Guizhou. Emechaa Ding Baozhen, gọvanọ Shandong na Sichuan gọvanọ nke Qing Dyn wee meziwanye ma mepee ọkụkọ ọhụrụ-Gongbao. E nyefewo ya ruo taa, e debekwara nri a dị ka nri ụlọikpe Beijing. Ka oge na-aga, Kung Pao Chicken gbasakwara na mba ọzọ.
A na-eji ọkụkọ esi nri Kung Pao Chicken dị ka isi ihe ma tinye ya na ahụekere, chili na ihe ndị ọzọ inyeaka. Uhie ma ọ bụghị oseose, oseose ma ọ bụghị oke iwe, siri ike oseose dị ụtọ, ire ụtọ na nke na-adị nkọ. N'ihi uto ose ya, ịdị nro nke ọkụkọ na ahụekere nke ahụekere.
Na Septemba 2018, e mere ya ka ọ bụrụ “nri ndị China” n’etiti iri iri kacha wee mara mma na Guizhou na nri iri ndị mara mma na Sichuan.
Kung Pao Chicken ji uto na oseose na spicyness na uto. Obi ọmịiko na ọkụkọ ahụekere, ọnụ bụ oseose ma sie ike, na-acha ọbara ọbara ma ọ bụghị na-ekpo ekpo, na-ekpo ekpo ma ọ bụghị nke siri ike, anụ na-adị larịị ma sie ike.
Mgbe ebubatara ọkụkọ kung pao, isi nke ire na-adị ntakịrị ka ọ na-ada ụda ma na-ekpo ọkụ nke ọma, mgbe ahụ ọ na-atọ ụtọ ihe ndị na-atọ ụtọ, na a ga-enwe mmetụta "utoojoo ma na-atọ" mgbe ị na-ata nri, ọkụkọ n'okpuru ọkụ, oseose, utoojoo ma na-atọ ụtọ ngwugwu, Mmiri yabasị, obere ego na-eme ka ndị mmadụ chọọ ịkwụsị.
Aha Kung Pao Chickens n'ebe nile bụ otu, mana ụzọ dị iche iche:
Sichuan nke Kung Pao Chicken na-eji ara ọkụkọ. Ebe ọ bụ na ara ọkụkọ adịghị mfe ịnụ ụtọ ya, ọkụkọ dị nro ma dịkwa nro. Ikwesiri iji azu mma tie okuko a ugboro ole na ole tupu i mee ihe ekpomeekpo, ma obu tinye otu akwa akwa, okuko a gha adi nro ma dikwa ire. Sdị Sichuan nke Kung Pao Chicken ga-eji ahụekere na-achaghị acha na ntụpọ chili a mịrị amị, na ekpomeekpo ga-abụ lychee na-ekpo ọkụ. Ememe chili di omimi ma na-esi isi, na-egosi ekpomeekpo di omimi.
Shadị nri nke Shandong nke Kung Pao Chicken na-eji apata ụkwụ ọkụkọ karịa. Iji mee ka uto nke ọkụkọ Kung Pao pụta ìhè, nri Shandong na-agbakwunye Ome achara ma ọ bụ ịnyịnya diced. Omume nke Kung Pao Chicken bụ otu ihe ahụ na nke nri Sichuan, mana a na-akwụkwu ụgwọ maka ịmị eghe, iji chekwaa ọhụụ nke ọkụkọ.
Gudị Guizhou nke Kung Pao Chicken na-eji Caba Chili, nke dị iche na nsụgharị Sichuan na Shandong. Gudị Guizhou nke Kung Pao Chicken dị nnu na oseose, nke na-atọ ụtọ na utoojoo. Biko attentionaa ntị n'okwu ahụ bụ "utoojoo". Hot na utoo bụ otu n'ime ihe ịrịba ama dị mkpa nke na-egosi ọdịiche dị n'etiti nri Guizhou na nri Sichuan.
Nke gara aga: Andtọ Ma Mkpụrụ Obi mapụtara mapụtara
Osote: Akọrọ ọkụkọ na ose